खसीको मासुको मूल्य बढ्यो, कति छ प्रति केजी ? - ramechhapkhabar.com
खसीको मासुको मूल्य बढ्यो, कति छ प्रति केजी ?
गौतमबुद्ध क्रिकेट रंगशाला निर्माणका लागि सरकार सकारात्मक छ : अर्थमन्त्री
आज चितवनमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले साहासिक कदम अघि बढाएको भन्दै उनले सरकारले यसमा कसरी सहयोग गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए । उनले भने, ‘थोरै लगानीमा पनि खेल खेलाउन सक्ने स्थितिमा पुगेको बुझेको छु । मैले उहाँहरुलाई निराश नहुनुस् अघि बढ्नुस भनेको छु ।’
क्रिकेट रंगशाला बनाउन रकम अभाव भएपछि धुर्मुस-सुन्तली फाउण्डेशनले पछिल्लो चार महिनायता काम रोकेर बसेको छ । आर्थिक अभाव र ऋण पनि बढ्दै गएको भन्दै फाउण्डेशनले काम रोकेको केही दिनअघि फाउण्डेशनका प्रमुख सीताराम कट्टेल धुर्मुसले एउटा भिडियो सन्देश जारी गर्दै बताएका थिए ।
‘विषम परिस्थितिमा बनाउनु पर्छ बन्नु पर्छ भनेर अघि बढेका थियौँ । तर बिडम्बना भन्नु पर्छ विगत चार महिनायता निर्माण रोकिएको छ,’ धुर्मुसले भनेका थिए, ‘कोभिडको महामारी र लकडाउन चाडवाडमा पनि बिचलिन नभई काम गर्‍यौँ । तोकिएको समयमा रंगशाला बनाउनु पर्छ भनेर लागि परि रह्यौँ ।’
उनले सरकारलाई क्रिकेट रंगशालाको अभिभावकत्व लिन पनि आग्रह गरेका थिए । उनले भनेका थिए ‘सरकारलाई सुरुबाटै अभिभावकत्व लिन आग्रह गरिरह्यौँ । संघीय सरकारदेखि स्थानीय सरकारसम्म पटकपटक पुग्यौँ । सहकार्यका लागि भनेर हामी नपुगेका ठाउँ सायदै कम होला ।’
उनले रंगशाला निर्माणका क्रममा लागेको १७ करोडको ऋणको भारी बोकेर हिँडेका समेत बताएका थिए ।